၆၆(ဃ)ဖြင့် အမှုဖွင့်ခံရမှု ဥပဒေအတိုင်း ရင်ဆိုင်သွားမည်ဟု အဆိုတော် တသသ ဆို - Yangon Media Group
လေးနှစ်လုံးလုံး ခံစားချက်ကို တရားရုံးရှေ့တွင် ပြောဆိုပြီး လူမှုကွန်ရက်ပေါ်တင်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ပုဒ်မ-၆၆ (ဃ)ဖြင့် အမှုဖွင့်ခံရမှုအပေါ် ဥပဒေအတိုင်း ရင်ဆိုင်သွားမည်ဟု အဆိုတော် တသသက ပြောကြားလိုက်သည်။ မတ် ၂၂ ရက်နံနက်ပိုင်း က Orchid Hotel တွင် ယင်းအမှု ဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ရာတွင် ၎င်းကမျက်ရည်များဖြင့် အထက်ပါအတိုင်း ပြောသည်။ အဆိုတော်တသသက ”လေး နှစ်လုံးလုံးပေးဆပ်ခဲ့ရတဲ့ ခံစားချက်ကို ၆၆(ဃ) ငြိလို့ ဖမ်းတယ်ဆို တော့လည်း ဥပဒေအတိုင်း ရှေ့နေ နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ ရင်ဆိုင်သွားပါ မယ်”ဟု ပြောသည်။
အဆိုတော် တသသဘက်မှ လိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေသည့် တ ရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဦးအောင် ဗိုလ်မင်းက ”အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး တော့ ရဲစခန်းမှာ ၁၃ ဦးဖွင့်ပေမယ့် တရားရုံးရောက်တော့ သုံးဦးပဲပေါ် ပေါက်တယ်။ အဲဒါ စွဲချက်အမိန့် ချတာ။ စွဲချက်မတင်ဘဲ လွှတ်လိုက်တယ်။ ပုဒ်မ၃၈ဝ အမှုကို မတ် ၁၆ ရက်က ချတဲ့အမိန့်ကို မနက်ဖြန် မှာ ပြင်ဦးလွင် ခရိုင်တရားရုံးကို တက်မှာပါ။ စဉ့်ကူးမြို့နယ် တရားရုံးက ချမှတ်တဲ့အမိန့်ကို မကျေနပ် လို့တက်တာပေါ့”ဟု ဒီမိုကရေစီ တူဒေးသို့ ပြောသည်။ အဆိုတော်တသသကို ပုဒ်မ- ၆၆(ဃ)ဖြင့် အမှုဖွင့်ထားမှုအ ပေါ် ရဲက အကြောင်းကြားခြင်းမ ရှိသေးကြောင်း၊ တရားရုံးရောက်မှ သာလျှင် ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းသွား မည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဆက်လက် ပြောသည်။
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စဉ့် ကူးမြို့နယ်၊ ကန်တောင်ကျေးရွာ ရှိ အဆိုတော်မခိုင် (ခ) တသသ၏နေအိမ်မှ ၂ဝ၁၄ ခုနှစ်အတွင်းက ကျပ်သိန်းပေါင်း လေးသိန်းကျော် တန်ဖိုးရှိပစ္စည်းများ ခိုးယူခံရမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး ၎င်းအိမ်မှ ကိုဇော်မျိုး ထွန်းပါ အလုပ်သမား ၁၃ ဦးအား ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ-၃၈ဝ (ခိုးမှု)ဖြင့် အမှုဖွင့် ခဲ့ကြောင်း၊ ယင်းအမှုမှ စွပ် စွဲခံအလုပ်သမား ကိုကိုစိုးပါ သုံးဦး ကို စဉ့်ကူးမြို့နယ်တရားရုံးသို့ တရား စွဲတင်ခဲ့ကြောင်း၊ စဉ့်ကူးမြို့နယ် တရားရုံးမှ ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် မတ် ၁၆ ရက်တွင် အထောက်အထားမခိုင် လုံသည့်အတွက် စွပ်စွဲခံများကို စွဲ ချက်မတင်ဘဲ လွှတ်ခဲ့ကြောင်း၊ ယင်းအပေါ် တရားဥပဒေနှင့်ပတ်သက် ၍ တရားရုံးရှေ့၌ ဝေဖန်ပြောဆို ပြီး လူမှုကွန်ရက်တွင် တင်ခဲ့သော ကြောင့် အဆိုတော် မခိုင် (ခ) တသသကို ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုဒ်မ-၆၆(ဃ)ဖြင့် စဉ့်ကူးမြို့နယ်တရား သူကြီးက မြို့နယ်ရဲစခန်း၌ အမှုဖွင့်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
”တရားလို အဆိုတော်တသသ က ကျေနပ်မှုမရှိဘဲ သူရဲ့လူမှုကွန် ရက်စာမျက်နှာမှာ တရားသူကြီး တွေ ဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်းအောင် လုပ်ခဲ့တယ်။ တရားရုံးက ချမှတ်တဲ့ အမိန့်ကို ကျေနပ်မှုမရှိလျှင် တရား စီရင်ရေး ဥပဒေလမ်းကြောင်းအရ တရားရုံးကို ပြင်ဆင်မှုတက်ရောက် င်ခွင့်ရှိပါလျက်နဲ့ ဥပဒေကို လျစ်လျူ ရှုပြီးတော့ အခုလိုလုပ်ခဲ့တာ။ အဆို တော် တသသကို လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာမှာ တရားသူကြီးတွေ ဂုဏ်သိက္ခာ ညှိုးနွမ်းအောင် တင်ပြ ရေးသားလို့ ၆၆(ဃ)နဲ့ တရားစွဲဆို ခဲ့ပါတယ်”ဟု မန္တလေးခရိုင်တရား သူကြီး ဒေါ်ခင်လှကြည်က မတ် ၂ဝ ရက်တွင် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး တရားလွှတ်တော်၌ ပြုလုပ်သည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောခဲ့သည်။
တနင်္သာရီ တိုင်းဒေသကြီး အတွင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင် ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဆီအုန်းကုမ္ပ??
ချင်းပြည်နယ်၌ မိုးရွာသွန်းလာမှုများကြောင့် ရေခန်းခြောက်ခဲ့သည့် ရာဇဂြိုဟ်ဆည်အတွင်းသို့ ရေ??
လာဘ်စားမှုဖြင့် ထောင်ခုနစ်နှစ် ကျခံနေရသော ပါကစ္စတန် ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း နာဝပ်ဇ်ရှာရစ်ဖ် ဆေးရ
စင်ကာပူလေကြောင်းလိုင်းမှ လေယာဉ်မှူး Alcohol test ကျရှုံးခဲ့၍ လေယာဉ်ခရီးစဉ် ဖျက်သိမ်းလိုက်ရ
တရုတ် ပါလီမန် စတင်ဖွင့်လှစ်၊ ရှီ၏ အာဏာ ဆက်လက်ရယူရေး အလေးထား